Ungayikhetha kanjani i-punch efanelekile yezingxenye zokugxiviza
Ukukhiqizwa kwe-Die kudinga ukuthembela ku-punch (cindezela) ukuhlinzeka ngamandla, usayizi ohlukile wokufa, uhlobo lwesakhiwo kudingeka lukhethe i-punch ehlukile ukuze ifane. Ukukhetha okunengqondo kwe-punch kunganciphisa izindleko futhi konge izinsizakusebenza. Izinga eliyinhloko le-punch yokukhetha ukufa lilinganiswa nge-tonnage, evame ukutholakala ...
Abakhiqizi abakhulu bemishini ukuze uhlaziye inqubo yayo yokusebenza
Abakhiqizi abakhulu bezindaba ukuze uhlaziye ukuthi ungakwenza kanjani ukufuna kwethu emakethe ukuthi kuhlangatshezwane nakho kangcono? Indawo yokuma kwento yokuma yomshini omkhulu inesibonelelo, futhi indawo yokuma ingaba phansi kahle ngemuva kokufakwa komshini. Le ndlela yamukelwa nge-suppo ...
Izinqubo ezinhlanu ezijwayelekile zokwakha ishidi lensimbi
Ishidi lensimbi (imvamisa insimbi noma i-aluminium) lidlala indima ebalulekile ekwakhiweni nasekukhiqizeni. Embonini yokwakha, isetshenziswa njengesakhiwo negobolondo noma uphahla; embonini yokukhiqiza, ishidi lensimbi lisetshenziselwa izingxenye zezimoto, imishini esindayo, njll. Ekwakheni izingxenye zensimbi yensimbi, m ...
Ukulungiswa nokucindezelwa kwabezindaba
Isondlo Ukulondolozwa kwemishini Ukulungiswa kwamahora we-1500-2000 Hlola bese ulungisa ukukhishwa kukawoyela nomsebenzi wokutholwa kwengcindezi kawoyela wokuthambisa. Isihlungi sohlelo lomoya, i-valve feeder yokulungisa i-valve neminye imisebenzi nokungcola kokuhlolwa kokuhlolwa kokulungiswa nokulungiswa okudingekayo. 3. Ukucindezela komoya ...
Imiyalo yokusebenza yomshini wokucindezela
Ukukhiqizwa kwezokuphepha Ngoba isibhakela sinezici zesivinini esikhulu nomfutho ophakeme, imithethonqubo ethile yokuphepha kufanele ibonwe lapho kusetshenziswa isibhakela sokuvala isikhala nokwakha. 1. Izingxenye zokudlulisa ezivezwe ngaphandle komshini kufanele zifakwe ngekhava evikelayo. Akuvunyelwe ...
Sakhiwo nginyathela die
Isakhiwo esifushane 1. Ukufa okuphezulu Okufa okuphezulu kuyingxenye ephezulu yediski yonke, okusho ukuthi, ingxenye yokufa efakwe kusilayidi somshini. 2. Isisekelo sesikhunta esingenhla Isisekelo sokufa esingenhla siyingxenye emise okwengcwecwe yaphezulu ongaphezulu, osondele kusilayida sokucindezela futhi esilungiswe nge-thrider slider ...
Ukusetshenziswa nokuhlukaniswa kwemishini
Ukusebenza nezici i-Punch isetshenziswa kakhulu ku-elekthronikhi, ukuxhumana, amakhompyutha, izinto zasendlini, ifenisha, ezokuhamba, (izimoto, izithuthuthu, amabhayisikili) izingxenye zezingxenyekazi zekhompiyutha nokunye ukugxiviza nokwakha. (1) ukuqina okuphezulu nokunemba okuphezulu kohlaka kushiselwe ngensimbi ipuleti ...
Umshini wokucindezela umshini we-Punch kanye nomgomo wawo wokusebenza
I-Punch press kanye nomgomo wayo wokusebenza iPunch press, umshini wokunyathela. Ekukhiqizweni kukazwelonke, inqubo yokunyathela inezinzuzo zokonga izinto namandla, ukusebenza kahle okuphezulu, izidingo eziphansi zobuchwepheshe ze-opharetha nokwenza imikhiqizo engenakufinyelelwa yi-proce mechanical ...
Umshini Wokucindezela weServo, Umshini Wokucindezela we-25t, Umshini o-300t Solid Double Point Mechanical Punch Machine, 260t Umshini Wokucindezela weServo, 1200t Straight Single Crank Punch Machine, Umshini o-400t Solid Point Oyedwa we-Mechanical Punch Machine,